Mandrakizay ny famonjen'ny Tompo
Isaia 51:1-16 "1 MIHAINOA Ahy, hianareo izay miezaka mitady fahamarinana, Dia izay mitady an’i Jehovah: Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo Sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo. 2 Eny, tsarovy Abrahama rainareo sy Saraha, izay niteraka anareo; fa fony mbola tokana izy, dia nantsoiko sy notahiko ary nohamaroiko. 3 Fa Jehovah mampionona an’i Ziona; Eny, mampionona izay rava rehetra ao Izy Ka manao ny efitra ao ho tahaka an’i Edena. Ary ny tany foana ao ho tahaka ny sahan’i Jehovah; Hafaliana sy haravoana no hita ao mbamin’ny fisaorana sy ny feo fiderana. 4 Mihainoa Ahy, ry vahoakako, Ary atongilano amiko ny sofinareo, ry oloko; Fa hisy lalàna hivoaka avy amiko, Ary ny fitsipiko dia hampitoeriko ho fanazavana ny firenena. 5 Akaiky ny fahamarinako, efa nivoaka ny famonjeko, ary ny sandriko no hitsara ny firenena; izaho no hantenain’ny nosy, ary ny sandriko no andrasany. 6 Andrandrao ho amin’ny lanitra ny masonareo, Ary jereo ny tany ambany; Fa ny lanitra ho levona tahaka ny setroka, Ary ny tany ho tahaka ny lamba mangarahara, Ary ny mponina ao dia ho faty tampoka; Fa ny famonjeko kosa haharitra mandrakizay, Ary ny fahamarinako tsy mba ho rava. 7 Mihainoa ahy, hianareo izay mahalala ny fahamarinana, dia hianao, ry firenena izay manana ny lalàko ao am-ponao; aza matahotra ny latsa ataon’ny zanak’olombelona, na manahy noho ny faharatsiany. 8 Fa ny kalalao hihinana azy tahaka ny fihinan-damba, Ary ny lolofotsy hihinana azy tahaka ny fihinam-bolon’ondry; Fa ny fahamarinako haharitra mandrakizay, Ary ny famonjeko hihatra amin’ny taranaka fara mandimby. 9 Mifohaza, mifohaza, ry sandrin’i Jehovah, mitafia hery! Mifohaza tahaka ny tamin’ny andro fahiny! dia tamin’ny taranaka lasa ela. Tsy Hianao va Ilay nitetitetika an-dRahaba sy nitomboka ny dragona? 10 Tsy Hianao va Ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin’ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana halehan’ny navotana? 11 Eny, ny navotan’i Jehovah hiverina Ka hankany Ziona amin’ny fihobiana, Ary ny fifaliana mandrakizay no ho eny an-dohany; Hahazo fifaliana sy faharavoravoana izy, Ka dia handositra ny alahelo sy ny fisentoana. 12 Izaho dia Izaho no mpampionona anareo, koa nahoana hianao no dia matahotra ny zanak’ olombelona mety maty sy ny zanak’olona hatao tahaka ny ahitra 13 ka manadino an’i Jehovah, Mpanao anao, izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany, sady matahotra lalandava mandritra ny andro hianao noho ny fahatezeran’ny mpampahory, raha mikendry hamono izy? Fa aiza intsony izay fahatezeran’ny mpampahory? 14 Izay mitanondrika dia ho afaka faingana; Tsy ho faty havarina ao an-davaka izy ary tsy ho diso hanina. 15 Fa Izaho Jehovah no Andriamanitrao, Izay mampanonja ny ranomasina, ka dia mirohondrohona ny onjany; Jehovah, Tompon’ny maro, no anarako. 16 Ary nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary ao amin’ny aloky ny tanako no nanaronako anao, hanao ny lanitra sy hanorina ny tany Aho ary hanao an’i Ziona hoe: Oloko hianao."
Mihaino sy manantena (1-8). Avy taiza ianareo?… Hevero ny razanareo… Iza no nampahery anareo teo anivon’ny faharavan’i Ziona? Iza no nanova ny tany ngazana ho zaridaina mahavariana? Mandrenesa tsara… Efa akaiky ny fanafahako, efa hiseho ny famonjeko ; ary ny fahefako no hitsara ny firenen-kafa. (5). Ho potika sy rava ny lanitra sy ny tany ary ny mponina eo aminy… fa ny famonjena sy ny fanafahan’ny Tompo kosa haharitra mandrakizay. (6,8) Fanafahana vaovao (9-11). Ny lasa tsy mba fanadino. Tahaka ny nanafahan’ny Tompo ny zanak’Israely tany Egypta ka niampitany maina ny ranomasina no hanafahany indray an’i Ziona izay babo ka hobim-pandresena, hafaliana mandrakizay, firavoravoana no ho solon’ny alahelo sy ny fisentoana (11b). Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? (12-16). Iza moa Andriamanitra? Ilay nahary ny zavatra rehetra. Ny Tompon’izao rehetra izao no anarany. (15b). “Vahoakako ianao. Ataoko eo am- bavanao ny teniko; ary arovako eo ambany aloky ny tanako ianao”. (16b DIEM) Mitsangana indray Jerosalema (17-23). Fahasimbana sy faharavana, ady sy mosary … Rakotry ny fahatezeran’ny Tompo teo aloha i Jerosalema fa “Ny Tompony, ilay Andriananahary sady Andriamaniny, dia mandaha-teny hiaro ny vahoakany: tapitra ny fahatezerany ary hafindrany amin’ireo nampahory ny olony” (22-23). Misy farany ny zavatra rehetra ary Andriamanitra no manana ny teny farany.
Hafatra: “Fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra”. Marka 10:27